RASMI: Chelsea Oo Shaacisay Magacyada SIDDEED Ciyaartoy Oo Ka Tegay Maanta Oo Arbaco Ah - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Chelsea Oo Shaacisay Magacyada SIDDEED Ciyaartoy Oo Ka Tegay Maanta Oo Arbaco Ah
RASMI: Chelsea Oo Shaacisay Magacyada SIDDEED Ciyaartoy Oo Ka Tegay Maanta Oo Arbaco Ah
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa shaacisay magacyada Siddeed ciyaartoy oo maanta oo Arbaco ah laga saaray liiska ciyaartoydeeda, isla markaana ka tegay.
Ciyaaryahannadan ay Chelsea fasaxday ayay heshiisyadoodu ku ekaayeen maalinta oo ay bishu tahay June 30, waxaana qayb ka ah laacibiin da’yar ah oo laga yaaabo in aanad magacyadooda garanayn iyo kuwo la iibiyey oo liiska kooxda ka baxayay maalinta ugu dambaysa June.
Horraantii bishan, Chelsea ayaa shaacisya inay sii daysay oo ay fasaxday tiro ciyaartooyo ah oo bixi doona, waxaanay dhamaantood liiska kooxda laga tirtirayaa maanta oo ay ka baxayaan Stamford Briegde.
Laacibiintan ayaa waxa ka mid ah goolhayaha reer Argentina ee Willy Caballero oo afar sannadood oo uu joogay London ka tegaya, iyadoo markii horena uu kaga soo biiray Manchester City oo sannadkii 2017 uu si xor ah uga yimid.
Waxa kale oo ciyaartoydan ku jira Jamal Blackman, Izzy Brown iyo Marco van Ginkel, waxaanay labada ciyaartoy oo ee dambe amaaho ugu maqnaayeen labada laacib ee Preston North End iyo PSV Eindhoven.
Dhinaca kale, waxa kale oo jira ciyaartoy Chelsea si rasmi ah maanta uga tegay iyadoo aan lasii daynin, laakiin si rasmi ah loo iibiyey, waana difaacii amaahda ugu maqnaa AC Milan ee Fikayo Tomori oo 25 milyan oo Gini ugu wareegay isla kooxdii uu amaahda ugu maqnaa.
Halkan kaga bogo ciyaartoyda Chelsea ka tegay ee liiskeeda laga saaray maanta oo Arbaco ah